Iyo Apple Watch inodonha mumutengo muUnited States. Zvino pa $ 199 | Ndinobva mac
Iyo Apple Watch inodonha mumutengo muUnited States. Zvino pa $ 199
Kana tikarangarira uye tikabvunza ruzivo rwewebsite yeApple yepamutemo, tichaona kuti mitengo yewachi yayo yakakurumbira yakagadziridzwa mwedzi mishoma yapfuura, mushure mekutaura kwaKurume Panguva iyoyo, Apple Watch Sport mhando dzakadzikiswa neinenge madhora makumi mashanu, uye iyo 50mm modhi yaidhura $ 299 muUnited States. Mutengo wakaringana uye wakanyanya kuwedzererwa, kunyangwe zvaive zvichiri kudhura mumaonero edu, kunyanya kana kuSpain ichiri ku € 38 kana € 369, zvichienderana neshanduro yaunoda kutenga, uye iyo € 419 yakadzikiswa, nekuti isati yambodhura.
Mune izvi, chitoro cheAmerica, Best Buy, Vakasarudza kudzikisa mutengo zvakanyanya, izvo zvakatishamisa, sezvo isu taive takamirira iyo nhau uye runyerekupe rweakakosha eApple Watch 2. Pazasi peye ruzivo rwese rwechiitiko uye zvazvinoreva kwatiri.
1 Iyo Apple Watch haina kumbobvira yakachipa zvakanyanya
2 Iyo Apple Watch 2 haizove inodhura zvakanyanya
Iyo Apple Watch haina kumbobvira yakachipa zvakanyanya
Sezvazviri. Muchitoro chakadai hatife takambofungidzira kuti wachi yakarumwa yemapuro inogona kunge iri pamutengo wakaderera kudaro, kunyangwe mushanduro yayo yeMitambo. Uye ndezvekuti ivo havazi mazana maviri nemakumi maviri nemakumi maviri nemapfumbamwe emadhora. Tiri kutaura nezve dhisikaundi yemadhora zana, ndiko kuti, chetatu pane iyo yekutanga kukosha iyo yakanga yatodzikiswa kare muchirimo. Mukupedzisira, iwe unogona kuwana itsva 38-millimeter Apple Watch mune yayo Sport vhezheni ye $ 199, iyo pamari yekutsinhana isingapfuure € 190. Mutengo unokwezva kwazvo uyo pasina mubvunzo unoshungurudza vashandisi vakazvitenga mumwedzi miviri kana mitatu yekupedzisira.
Ehe, dhisikaundi yaive paBest Buy, kwete Apple Store. Dai Apple yaidzikisa zvakanyanya, tinenge tichitaura nezvechimwe chinhu chine simba uye kunetseka kuchizvarwa chinotevera. Kana iyo kambani pachayo inokwanisa kuita maviri ekudzora zvachose mumutsara, zvaizoreva kuti haina kuvimba nechigadzirwa chayo uye kuti inoda kuibvisa nekukurumidza sezvazvinogona. Kuziva avo vanobva kuCupertino sekuvaziva kwatinoita, tinogona kufunga kuti pakati penyaya idzi nenhau dzekuti mabhanhire anga ave kupera, vachaburitsa Apple Watch 2 munguva pfupi, kunyangwe paine runyerekupe rwekuti ichanonoka nekuda kwekugadzira uye dhizaini dhizaini, sezvo zvinoitika kune iPhone 7.
Uye zvakare, iyo inoda kudzikisa mutengo inoratidza zvimwe zvakakosha zvinhu sekunge musika hausi kuda kushandisa yakawanda kudaro pa smartwatch. Izvo zvichave zvine simba kune iyo Apple Watch 2 nemutengo wayo. Kunyatsoteerera shanduko dzatichaona kudonha uku.
Iyo Apple Watch 2 haizove inodhura zvakanyanya
Kutanga ivo vanodzikisa iyo yekutanga modhi, vobva vaidzikisa zvakare, kunyangwe kana isiri muchitoro chepamutemo. Kana tikaramba tichiita seizvi, vanozopedzisira vazvipa nekutenga kweiyo iPhone nyowani, iyo yaisazove yakaipa pfungwa sekupa vadzidzi, mushure mekunge mutengo wese wakafanana newaBeats mahedhifoni. Zvakadaro kutanga kwavo kuti vape zvinhu. Zvataizoona zvingave a Apple Watch 2 iyo yaizodhura zvakafanana neazvino mamodheru, zvirinani mushanduro inodhura kwazvo, iyo Sport. Tambo uye zvese zvinogona kusiyana, asi chishandiso pachacho hachigone kukwira nemutengo.
Vashandisi havana kutenga chizvarwa chekutanga kwete kungomirira chechipiri icho chaizogadzirisa zviputi uye zvikanganiso uye kugadzirisa, asi nekuti mutengo waive wakanyanya. 400 euros yewachi yakaita seiyi yakanyanya kukwirira kumushandisi wepakati, uye zvimwe kana iwe usingazive zvekuita nayo kana kana uchizoishandisa. Inogona kunge iri fashoni uye yepamusoro zvinhu, asi kana iwe ukaedza kuenda nenzira iyoyo, haukunde sevazhinji vashandisi kana kutonga musika wewatchwatch.
Samsung inoenderera nekuvandudza yako nemamwe makambani zvakafanana. Apple ine nzira mbiri uye nekuwedzera kushandura chishandiso. Kana iyo Apple Watch 2 isiri chimwe chinhu kunze kwekuvandudzwa kwazvino nezvimwe zvinhu zvitsva, tinotarisira kuti mutengo ucharamba uri pa $ 299, kana kutoderera, sezvo chisiri chinhu chitsva kana hunyanzvi sezvazvaive gore rimwe rapfuura. svikiro.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Iyo Apple Watch inodonha mumutengo muUnited States. Zvino pa $ 199
Nei iyo tambo ye iPhone ichigara ichipaza?
Iyo yazvino Apple Music yakasarudzika, dambarefu raFrank Ocean, rave nepirisita mazana manomwe nemakumi mashanu